Urruradda muslimiinta oo codsaday in la suggo ammaanka masaajidada | Somaliska
Urruradda muslimiinta oo codsaday in la suggo ammaanka masaajidada
Tan iyo wixii ka dambeeyey dabkii la qabad siiyeye masaajid ku yiilay magaaladda Örebro ee dalkaan Iswiidhan, waxaa isa soo taraya walaaca ay muslimiintu ka qabaan falalka noocan ah ee lugu bartilmaameedsanayo goobahooda cibaadadda.
Urruradda muslimiinta dalkan ayaa qoraal codsi ah oo ay saareen ku sheegeen in la damaanad qaado ammaanka masaajidada. “Dhinacyadda dowladda ee ay qusuuso ma qaadin talaabo ka dhan ah hanjabaadaha soo laa laabtay” ayaa lugu yiri qoraalka ay urruraddu soo saareen.
Urruraddan oo kulan deg deg ah ay iskugu yimaadeen maalin ka dib dabkii la qabasiiyey masaajidka Örebro ayey qoraal wada jir ah oo ay soo saareen ku bidhaamiyeen dhibaatooyinkan soo laabtay, waxaaana ay codsadeen in amaanka masaajidada la suggo.
“Waxaan tilmaanay sawirka cabsida leh iyo xaaladda ammaan ee masaajidada dalka marar hore, waan la kulanay soo dhaweyn aan wax qabad laheyn oo ay quseeyo dhinacyadda hey’adaha. Waxaan hadda codsaneeynaa muhiimadda ay leedahay in xal loo sameeyo lana damaanad qaado ammaanka dadka masaajidada iyo dadka soo booqda”
Ugu dambeyntiina maalintii talaada ayaa waxaa dab la qabadsiiyey masaajid muslimiintu leedahay oo ku yaala xaafadda Vivalla ee magaaladda Örebro ee dalkaan Iswiidhan, waaxaa falkaasi loo qabtay wiil labaatan jir ah oo ilaa iyo iminka ay boolisku gacanta ku hayaan.
Hay’ada Islamic Relief oo qaadaysa Zakat Al-fitr
Nin cunsuri ah hooyo soomaaliyeed iyo gabadheeda ku weeraray hilib doofaar